Ebumnuche nke Mkpụrụ Obi na Latin America na Caribbean - Geofumadas
Ala na-ejikarị atụmatụ eserese na Latin America na Caribbean
Febụwarị, 2016 cadastre, Apụta, Land Management
Inclọ Ọrụ Lincoln nke Iwu Iwu na-akpọ ndị ọrụ afọ ofufo sitere n'obodo niile nke Latin America na Caribbean ka ha kere òkè na-ewu Map nke Valkpụrụ Ala maka mpaghara ahụ. A ga-eme ihe omume a site na February 8 ruo March 31, 2016.
Mara omume nke ahịa ala dị mkpa maka nkọwa kachasị mma nke atumatu obodo mepere emepe. Maka nke a, mmepe nke ụlọ akụ na-ahazi usoro na ịhazi usoro nke mpaghara mpaghara na nnweta n'efu ga-abụ isi ihe maka ndị na-eme atụmatụ ime obodo.
"5 data si n'obodo gị!" Itinye aka na nke a dị mfe. Nanị ihe ọ chọrọ bụ ịnye data 5 ma ọ bụ ihe ndị dị ugbu a na obodo gị ma denye aha dịka onye ọrụ nke SIG Web map iji chọta ha na map.
Inwe aka n'efu ma na-akwụ ụgwọ. A na-eji ndị ọkachamara, ndị ọkà mmụta na ndị ọrụ gọọmentị na-ejikọta atụmatụ iwu obodo. Ndị ọrụ afọ ofufo ga-apụta dị ka ndị na-akwadoghị aha ha ma na saịtị weebụ ma na akụkọ nyocha.
Ihe ugbu a bu oru nke Mario Piumetto na Diego Erba nyere ha, ya na mmemme nke Latin America na Caribbean nke Lincoln Institute. Maka ama ọzọ gbasara oru ngo na otu esi esonye, ​​biko jụọ Valor Suelo América Latina.
Ahịhịa ala na-emetụta ọganihu nke obodo, ọ dị mkpa ka ihe ọmụma ha dịkwuo mma iji meziwanye usoro iwu obodo.
Ụkpụrụ ala dị nnọọ iche na mpaghara, yana arụ ọrụ nke ahịa ndị a, Otú ọ dị, ọ dịghị ebe a na-agagharị, ókèala mpaghara na ohere inweta ohere ịnweta ohere na-akwado ndokwa obodo na-eduzi ọmụmụ ihe atụ.
Ọrụ ahụ dị ka ihe bụ isi mere iji wuo map nke ebe a na-akpọ obodo ndị mepere emepe na Latin America na Caribbean dabere na data nke ndị ọrụ afọ ofufo na-anakọta na usoro nke oku, oku na-emeghe ma na-emeghe (ìgwè mmadụ). A ga - edebanye aha na nhazi usoro data na GIS na igwe ojii.
A na-akpọrọ ndị ọkachamara, ndị ọkachamara na ndị ọrụ gọọmentị na ndị ọrụ gọọmenti na-akwado iwu nke ala, ọ na-arụ ọrụ ruo mgbe March 31. Ndị ọrụ afọ ofufo ga-apụta dịka ndị na-emekọ ihe ọnụ na ndị na-agagharị n'obodo ahụ ma na weebụsaịtị na akụkọ ndị a na-ebipụta, ma nwee ohere inweta ozi nke ala ala emepụta.
"5 data nke obodo gị"! Nke ahụ bụ okwu okwu oku ahụ. Ịme òkè dị mfe, na-achọ ntinye nke ọ dịkarịa ala 5 data (isi na map) nke ụkpụrụ ala ala ugbu a na obodo ahụ a nyochara.
Kedu ụdị data a ga-achota
A ga-enye data
A na-atụ anya Data 5 obodo bara uru; ọ bụrụ na ị nwere ike itinye aka ga-abụ ihe magburu onwe ya ma mee ka ozi ọma ka mma.
Na-achọ ihe maka ire ere, nke ndị ikwu, ndị maara, na ndị agbata obi gị, na akwụkwọ akụkọ, na weebụsaịtị ma ọ bụ magazin pụrụ iche nke a na-ewere dị mma; ị nwekwara ike ịjụ ndị ọkachamara bụ ndị nyochachara ụfọdụ.
N'ọnọdụ niile, anyị ga-enyerịrị ya data sitere na obodo mepere emepe, ụkpụrụ ahịa ahịa ugbu a y naanị ala, site na nza na-enweghị ndozi ma ọ bụ ọnọdụ ebe agwọ kwụsịrị uru ha bara.
Maka data ọ bụla, a na-atụ anya ka ị nakọta ozi ndị a
Ebe: adreesị ma ọ bụ ọnọdụ dị mma, ikwe ka ị tinye ya n'ụzọ ziri ezi na map.
Ugbua ala bara uru, kwa mita mita na dollar.
Ọrụ dị. Otu n'ime nhọrọ ndị a ga - ahọrọ: 1 - mmiri na ìhè, 2 - mmiri, ìhè na pavụ ma ọ bụ 3 - na-enweghị ọrụ.
Akara nyocha nke batch. otu n'ime ndị na-esonụ nhọrọ ga-ahọrọ: 1- m1.000 erughị 2, 2 na 1.000 5.000- n'etiti m2, 3- n'etiti 5.000 na 10.000 2- m4 ma ọ bụ ukwuu karịa 10.000 m2.
Isi ihe ọmụma. A ga - ahọrọ otu n'ime nhọrọ ndị a: 1- ire ​​ere, ọnụahịa 2 / nyocha nke onwe, 3 - ihe enyere site n'aka onye ụjọ, 4- enye bipụtara ma ọ bụ 5- ozi nke onye ozi ruru eru nyere.
Otu esi esonye
Ohere ahụ na-egosi ọganihu nke Map nke Ụkpụrụ na GIS ojii
Previous Post«Previous MSc MSN na Geographic Information Systems
Next Post Migging a Geospatial platform over 10 afọ mgbe nke a gasịrị - Microstation Geographics - Oracle SpatialNext »
3 na-egosi "Atụmatụ ppingkpụrụ Maapụ Ala na Latin America na Caribbean"
Sergio Sosa Quilaleo kwuru, sị:
February, 2016 na
Anyị nwere ekele na ị nwere mmasị na ọrụ ahụ!
Oku a nile bu Latin America, ya mere, ihe nile bu nke Buenos Aires nke i nwere ike inye aka bu ndi anabata.
Ikere òkè dị mfe! ị nwere ike tinye blog nke oru ngo: http://valorsueloamericalatina.org/como-participar/
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ, m ga-eji obi ụtọ na-eduzi gị! Kpọtụrụ anyị site na e-mail: Valuesinmobiliariosal@gmail.com
Onye nhazi Sergio Sosa Quilaleo
ANTONIO kwuru, sị:
Mbụ, enwere ike ịme na Buenos Aires nke dị na nke abụọ, yana nkwado ntanetị.